Nyocha Semalt: Gịnị Bụ Ọ Hà Ka Ọ Na-arụkwa?
Azụmaahịa ọ bụla chọrọ ịbawanye okporo ụzọ ha na websaịtị Maka azụmahịa dị n'ịntanetị, ọ bụ ntọala nke ihe ịga nke ọma ha.
Ajụjụ dị mkpa bụ “N'ụzọ dị a ”aa?”
Ebee ka ị na-atụgharị maka ọrụ SEO na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ na-arụ ọrụ n'ezie?
Otu ọma, otu ngwaọrụ nke nwere ike imeziwanye arụmọrụ na okporo ụzọ saịtị gị nke ọma bụ Semalt.
Yabụ na nyocha Semalt a, anyị ga - enyere gị aka ịchọpụta ma ọ bara uru.
Nke a bụ ihe anyị ga-ekpuchi:
Gịnị Bụ Semalt.com?
Nyocha Ndị Ahịa Semalt
Otu esi eji Semalt
N'ebe a na Semalt, anyị nwere nchịkọta nke ngwaọrụ maka SEO (Search Ngini Nchọpụta).
Anyị nọ na ebumnuche iji mee ka azụmahịa ndị dị n'ịntanetị nwee ọganihu, ọ bụghị naanị na SEO, kamakwa yana ọrụ dị ka mmepe weebụ, nyocha, na mmepụta vidiyo. (More na ọrụ anyị mgbe e mesịrị).
Mana anyị abụghị naanị ụlọ ọrụ SEO ọ bụla. Anyị hụrụ ndị mmadụ n'anya gụnyere ọrụ a.
Ma inwere ike izute ndi otu ndi otu anyi na nduru , site na mmepe azumahia rue na nke onye ahia ya rue ihe ndi mmadu. Can ga - ahụ ihe ọrụ onye ọ bụla bụ, mụta ole na ole n'ime ntụrụndụ anyị, mgbe ahụ ị nwere ike ịkpọ anyị oku n'oge ọ bụla n'ehihie ma ọ bụ n'abalị. (Anyị nwere ike ịsụ bekee, French, Italian, Turkish, na ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ!)
Onwere otu onye otu anyi nwere obi uto banyere anyi: Turbo.
Mgbe anyị kwagara n’ọfis ọhụrụ anyị n’afọ 2014, anyị hụrụ Turbo n’ite osisi ochie. Onye nwe ụlọ ọrụ gara aga hapụrụ ya ebe ahụ.
Oh, anyị kwesịrị ikwu na Turbo bụ mbe.
Site n'oge ahụ gaa n'ihu, anyị were ya dị ka onye na-elekọta anụ ụlọ na mascot ụlọ ọrụ. Ugbu a, ọ bi na nnukwu aquarium anyị ebe ke Ukraine.
Kedu ihe ndị otu anyị ga - eme gị? Anyị niile bụ maka SEO.
Nchọpụta Ihe Nchọpụta Nchọpụta bụ mgbe ị na-eme ụfọdụ omume iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị gosipụta dị elu na nsonaazụ ọchụchọ. SEO bụ ihe niile dị ndụ, na-emegide ịnweta mgbasa ozi akwụ ụgwọ.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere weebụsaịtị ma ịchọrọ ịbawanye okporo ụzọ gị, SEO kwesịrị ịbụ akụkụ nke atụmatụ gị.
Ihe omume SEO dị na gburugburu ịchọrọ nchọta ọchụchọ kachasị ewu ewu - Google. Na Google nwere usoro algorithm nke na-arụpụta nsonaazụ ọchụchọ dabere na ihe o kwenyere na onye nyocha ahụ na-achọ.
Na ọkwa kachasị, ị nwere ike kewaa SEO na ngalaba abụọ: na peeji peeji SEO na peeji nke SEO.
Na peeji nke SEO na- ezo aka n'ihe ndị dị n'okpuru njikwa gị n'ime weebụsaịtị gị. Nke a gụnyere ọsọ saịtị, arụmọrụ koodu, ogo ọdịnaya, yana okirikiri nhọrọ ukwuu nke saịtị gị. Ihe ndị a niile dị ezigbo mkpa maka arụmọrụ SEO gị.
Off-out SEO na- agụnye ihe dị ka backlinks sitere na saịtị ndị ọzọ, ntinye akwụkwọ mgbasa ozi, na ụzọ ahịa ndị ọzọ na mpụga weebụsaịtị gị. Ihe kachasị mkpa na peeji nke SEO gụnyere ọnụ ọgụgụ nke backlinks na ogo nke backlinks ndị ahụ.
O diri gi nma ma oburu na saịtị ndi ozo di elu na ebe ahia gi juputara na saiti gi. Google nwere mmasị na nke a, ọ ga-edobe weebụsaịtị gị elu.
Agbanyeghị, ihe kachasị mkpa ị nwere ike ime bụ iwepụta ọdịnaya dị elu kwa ụbọchị. SEO bụ egwuregwu ogologo oge.
Ndinam Google ga-abịa ma ọ bụrụ n’ilekwasị anya na ịmepụta ọdịnaya dị ịtụnanya. Ndị mmadụ ga-ejikọ saịtị gị ma zigara ndị ọzọ ebe ahụ ma ọ bụrụ na ị na-etinye ọdịnaya dị ukwuu.
Semalt na-enye nkwado zuru oke nke ọrụ SEO, ma ụgwọ ma n'efu. N'ụzọ bụ isi, anyị nwere ike ibute saịtị gị ma na-agba ọsọ ma na-eme nke ọma, niile n'okpuru otu ụlọ.
Ndị a bụ ọrụ anyị na-enye:
Ngwaọrụ Nkwalite Akpaaka
Ka anyị kpuchie ọrụ nke ọ bụla. Nke a ga - eme ka ị mata echiche kacha mma maka ihe ị ga - erite na ya.
Ihe ngwugwu AutoSEO anyị bụ ihe anyị kpọrọ “ụlọ zuru oke” maka azụmaahịa dị n'ịntanetị. Site na ngwugwu a, ị ga - enweta:
Nlele nke saịtị weebụ
Peeji ihu akwụkwọ
Mepụtara weebụsaịtị gị dị egwu. Anyị na-ebuli ya maka Google.
Iji ihe akpọrọ "okpu ọcha" usoro SEO, ị nwere ike imeziwanye okporo ụzọ gị na-amalite naanị $ 0.99.
AutoSEO kacha mma maka:
Ndị nwere obere azụmaahịa
N'elu ọrụ SEO dị mkpa - dị ka njikarịcha n'ime, ndozi njehie, ide ọdịnaya, ịnweta njikọ, yana ịkwado - ị na-enweta ọtụtụ ihe na FullSEO.
Ndị otu anyị SEO ga-ewulite atụmatụ ahaziri iche maka gị na azụmaahịa gị. Anyị na-eleba anya n’ihe ịchọrọ ịnye ọkwa dị elu ma mejuputa atụmatụ ahụ iji meziwanye weebụsaịtị gị.
FullSEO kacha mma maka:
Na Semalt Web Analytics, ị nwere ike:
Lelee ọkwa weebụ gị
Mee saịtị gị ka ịchọta ndị ọzọ
Debe taabụ na weebụsaịtị weebụsaịtị
Chọpụta mmejọ njiri na ibe
Nweta akụkọ gbasara ogo weebụ
Maka ịmara otu esi emeziwanye weebụsaịtị gị, ị ga-ebu ụzọ hụ iberibe efu. Site na nyocha anyị, ị nwere ike ịchọta isi okwu na-atụ aro, chọpụta ihe ndị mmadụ na-achọ, wee kpughee nzuzo nke asọmpi gị.
Nchịkọta Webụsaịtị Semalt kacha mma maka:
Anyị ga-aga n'ihu rụọrọ gị weebụsaịtị gị. Anyị na -emepụta weebụsaịtị wehere aka na nke ọkachamara na-anabata ndị ọbịa ma na-atụ ha aka na ụzọ ziri ezi.
Anya na ọsọ nke weebụsaịtị gị na-emetụta ọnụego bounce gị na oge elele ibe. Nke ahụ ga - emetụta SEO gị.
Ọ bụ ya mere weebụsaịtị ọ bụla anyị mepụtara na-adị ngwa, mfe ịnyagharị, na njikarịcha maka SEO.
Vidiyo bu ihe zuru oke ma na - anakpo ndi ozo. Ọ bụ ya mere ịchọrọ vidiyo ọkachamara iji mee ka saịtị gị pụọ iche.
Ọ bụghị naanị vidiyo na-atọ ndị ahịa ụtọ ma na-agwa ha, kamakwa ha na-edebe ya na saịtị gị ogologo oge. Nke ahụ dịkwa mma maka ogo SEO gị.
Site na ọrụ mmepụta vidiyo anyị, anyị ga-enyere gị aka:
Mepụta vidiyo ahụ
Anyị na-na-enye ndị ọkachamara toneover talent!
Mmepụta vidiyo anyị kachasị mma maka:
Iji mee ihe n'eziokwu, anyị nwere ike ịga n'ihu na maka ngwaahịa na ọrụ anyị. Nke ahụ bụ n'ihi na anyị nwere oke mmasị n'ihe anyị na-eme.
Mana ọ ga - enyere gị aka ịnụ ihe ndị ahịa anyị kwurula gbasara anyị. Yabụ, nke a bụ ụfọdụ nzaghachi ndị ahịa kachasị amasị anyị ...
Kristian nke MALO CLINIC kwuru, "Anyị ejirila Semalt ... ghọrọ ebe nrụọrụ weebụ kachasị elu nke mba ahụ n'afọ atọ gara aga. "... Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkawanye ọkwa maka ogo, mgbe ahụ Semalt bụ nkwanye kachasị mma."
Wojtek nke Msofas Limited kwuru, “Otu n'ime ụlọ ọrụ SEO kacha mma m ga-ekwu. “Agbalịrị m ọtụtụ ụlọ ọrụ SEO mana enwetaghị m ihe m chọrọ. Mana Semalt enwetara m ya. ... Ha ghọtara ihe m websaịtị chọrọ ma ha mere ya niile maka ndozi nke azụmahịa m ma na o mechara mụbaa m ego. "
Jose-ọkà okwu Spanish si Baja Properties kwuru, "Anyị nwere obi ụtọ na onye njikwa anyị Volodymyr Skyba na-esochi oku ekwentị, ozi ịntanetị na akụkọ kwa izu. "Anyị bụ ndị mbụ na ọtụtụ mixes nke Keywords na anyị na ụlọ ọrụ na-edu a na-akụ anyị ozi ịntanetị ọtụtụ ọnwa ugbu a. N'agbanyeghị na m bụ onye webmaster, m ka na-eche ihe anwansi ha na-eme iji mee ihe a. ”
N'ụzọ doro anya, ndị ahịa anyị hụrụ anyị n'anya. Anyị hụrụ ha n'anya ozugbo!
Ozugbo ibidoro na peeji nke ụlọ Semalt , ihe mbụ ị ga-ahụ bụ ngwa ọrụ na-egosi ogo ngalaba gị. Naanị tinye URL gị ma see “Malite Ugbu a.”
I mechaa nke ahụ, a ga-akpali gị ịdebanye aha gị. Anyị mere usoro a ka enwere ike dị mfe - naanị tinye adreesị email gị, mepụta paswọọdụ, ma gwa anyị aha gị.
Ga-enwe ike inweta akụkọ gị, tinyekwa mmelite ndị ọzọ na igbe mbata gị.
Mgbe idebanye aha, a ga-akpọrọ gị dashboard gị. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ ọkwa gị, nweta nyocha weebụ, ma mepụta usoro ọhụrụ.
N'aka nri, you'll ga - ahụ okwu gị na ogo gị maka nke ọ bụla. Nwere ike itinye mkpụrụ edemede ọhụụ ma hụ akụkọ nchịkọta akụkọ zuru oke.
Site na ịga na taabụ onye nyocha weebụsaịtị na akuku aka ekpe, ị nwere ike ịhụ:
Echiche nlele kwa ụbọchị kwa onye ọbịa
Kwa ụbọchị na saịtị
Ihe omuma SEO zuru ezu
Ọsọ na usility
Ihe nkesa na nchekwa data
Ndụmọdụ maka otu ị ga - esi bulie saịtị gị
Nwekwara ike ịga na taabụ Report Center iji mepụta oru ngo na mkpesa metụtara.
Na mkpesa gị, ịnwere ike ịgbakwunye nzacha, ọge, ụdị, na akara ụbọchị. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịhazi oge na mgbe ị ga-ewepụta akụkọ gị ma zitere gị ozi.
Na mkpokọta, ị nwere ike nweta akụrụngwa na - enweghị ihe bara uru yana ọnụ ọgụgụ bara uru nke ukwuu.
Ma n'eziokwu, ị nwere ike ịkwalite iji nweta enyemaka ndị ọzọ na weebụsaịtị gị. Site n’ime nke a, anyị nwere ike inyere gị aka ịrịgo n’elu nsonaazụ nchọta, na-ekele anyị nka, akụrụngwa, ihe ọmụma, na ndị otu otu kachasị.
Nyocha Semalt a na-egosi gị otu esi enyere aka na ọrụ SEO ndị a na-akwụghị ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ nwere ike ịbara ọkwa weebụsaịtị gị. Ọ bụrụkwa na ogo ogo saịtị gị ka ọ dị, ị ga-azụ ahịa karịa.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ imeziwanye ahụmịhe SEO gị na nke ndị ọbịa, anyị ekpuchiela gị site n'akụkụ niile.
Mgbe ị nwetasịrị akụkọ saịtị gị n'efu, ị nwere ike ịdebanye aha, anyị ga-akpọbata ozugbo!